Dugsi noocee ah ayaa ah Dugsiga Sahaminta Sare?
Dugsiga Sare ee Exploration (Exploration High School) waa mid aan caadi ahayn oo ku saleysan istiraatiijiyadda dadweynaha, oo ay fasaxday Guild of Minnesota Charter Schools.
Waa maxay fasalada Dugsiga Sare ee Exploration
Awood buuxda, Dugsiga Sare ee Sahaminta wuxuu u adeegi doonaa fasalada 9aad - 12aad.
Goorma ayaa la furayaa Dugsiga Sare ee Exploration?
Sahaminta ayaa la furi doonaa dayrta 2021 iyadoo ardayda fasalada 9aad iyo 10aad.
Ma jirtaa waxbarid la dhigto?
Maya, iskuul dowladeed ahaan arday kasta oo da 'ahaan ku habboon Minnesota wuxuu u tagi karaa bilaash.
Waa maxay cabirka loogu talagalay dugsiga?
Awood buuxda, waxaan haysan doonnaa qiyaastii 150 arday.
Xagee iskuulku yaali doonaa?
Waa maxay nooca jir ahaaneed ee habboon?
Dugsiga Sare ee Exploration wuxuu adeegsan doonaa qaababka naqshadeynta Beesha Caalamka ee loo riyaaqay ee loo yaqaan 'Fielding Nair International' si loo abuuro meel dhiirrigelisa wanaagga.
Tani miyuu cunugeyga u diyaarin doonaa kuleejka?
Xaqiiqdii! Haddii kuleejadu tahay wadiiqooyinka uu ilmahaagu doonayo inuu raaco, hagayaasheena waxbarashadu waxay la shaqeyn doonaan cunugaaga si loo hubiyo inay sameynayaan wax kasta oo ay awoodaan oo kaliya inay galaan koleejka, laakiin inay guuleystaan ​​markay halkaas joogaan.
Barnaamijkeena firfircoon iyo isticmaalka dabacsan ee waqtiga iyo boosku wuxuu ardayda u abuuraa fursado ay ku horumariyaan xirfadaha lagama maarmaanka ah iyadoo loo marayo xalinta dhibaatada firfircoon. Ogolaanshaha kuleejyada ee guud ahaan dalka ayaa dalbanaya in la arko banaanbaxyo dhab ah oo barasho, taas oo ardayda oo dhan ay ku muujin doonaan iyada oo loo marayo faylalka tacliimeed ee mashaariic dhinacyo badan leh.
Wax dheeri ah ka baro wareysiga fiidiyowga ah ee aan la yeelanay La-Taliyaha Ogolaanshaha Ogolaanshaha Jaamacadda Minnesota, Cali Oesterhuis, hoosta.
Iskuulku ma leeyahay awood dhaqaale?
Haa! Ka dib markii ay sahaminta dugsiga sare ka heshay ogolaanshaha 501 (c) 3 xaalad aan faa'iido doon ahayn IRS bishii Diseembar 2018, dugsigu wuxuu ka helay $ 100,000 oo ka socda Bush Foundation qayb ka mid ah Naqshadaynta Dugsigooda ee loogu talagalay Hindisaha Waxbarashada Gaarka ah.
Deyrta 2019, Dugsiga Sare ee Sahaminta ayaa ka helay deeq-hoosaad Barnaamijka Dugsiga Charter Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE). Tani waxay xaqiijineysaa $ 200,000 sanadkayaga hor-hawlgalka (oo aan hadda ku jirno) iyo ugu yaraan $ 175,000 midkiiba labadii sano ee ugu horreysay hawlgalka.
Iskuulku wuxuu kaloo raadinayaa lacag bilaw ah oo ka timaadda kafaala qaadayaasha shirkadaha iyo NewSchools Venture Fund. Lacagahan bilawga ahi waxay hubinayaan in barnaamijku u bilaabi karo sidii loogu talagalay, oo bixinaya khibrad waxbarasho oo isbeddel ku socota dhammaan ardayda dhigata Dugsiga Sare ee Sahaminta.
Ardaydu waxay heli doonaan kaararka tareenka ee mitrooga ee loogu tala galay inay ku wareegaan magaalada oo dhan una xaadiraan Dugsiga Sare ee Exploration. Inaad aad ugu dhowdahay isgoyska Broadway - Jaamacadaha, jidad badan oo basaska ayaa tagi kara Dugsiga Sare ee Sahaminta. Waxa kale oo jira barxad dhigasho goobta ah oo ay ardaydu ku kaxaysan karaan naftooda iyo marin fudud oo laga helo I-94 oo loogu talagalay waalidiinta inay ardayda ka saaraan.
Ma jirtaa caddeyn muujineysa in qaabka sahamintu uu shaqeynayo?
Waxa jira buur caddayn ah in wakaaladda barashada oo lagu horumariyo cilaaqaadka qotada dheer ay tahay habka ugu wanaagsan ee lagu taageero shaqsiyaadka ardayda ah, iyadoon loo eegin da'da. Boqol sano ka hor, Maria Montessori iyo John Dewey waxay daabaceen natiijooyinkooda ku saabsan kobcinta barashada madaxbannaan iyo u adeegsiga waxbarashada dadweynaha hab lagu biirinayo bulsho caafimaad qabta. Dhawaan, tusaalooyinka iskuulada la midka ah sahaminta waxay muujinayaan awoodda dib u soo celinta Montessori iyo natiijadii Dewey ee Qarnigii 21aad. Iowa BIG, Hal Stone, Northwest Passage, Big Picture Learning, Acton Academies, High Tech High, iyo MN New Country ayaa tusaale u ah iskuulada riixaya xuduudaha sida aan u xoojin karno shakhsiyaadka bartayaasha ah ugana shaqeyn karno bulsho wanaagsan.